Fanjakan’i Baroa ve i Tonizia? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 27 Jolay 2012 7:25 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, русский, Português, Italiano, বাংলা, 한국어, عربي, polski, 繁體中文, 简体中文, Ελληνικά, English
Mafana tanteraka ny adihevitra nanomboka tamin'ny 19 Jolay raha nosokajian’ i Mahmoud Baroudi, mpikambana ao amin'ny Antenimieram-panorenana (NAC) ho “Filohan'ny Repoblikan’ akondro [Fanjakan'i Baroa] ny filoha vonjimaika Moncef Marzouki. Niteraka savorovoro tanteraka tao anatin'ny Antenimiera izany fanambarana izany. Nangataka tamin'i Baroudi ireo depiote mpikambana ao amin'ny antoko telon'ny firaisan'ny governemanta mba hitsipaka ny fanambarany. Nandà anefa izy. “Rehefa manana filohan'ny Repoblika ianareo, amin'izay isika vao afaka miresaka. Tsy tsipahiko ny teniko Andriamatoa filoha [milaza ny filohan'ny NCA ]. Ao anatin'ny Repoblikan'akondro [fanjakan'i Baroa] isika, ary ianareo depiote rehetra no solontenan'izany Fanjakan'i Baroa izany,” hoy i Baroudi namaly ireo depiote nahatsiaro afa-baraka.
Nampiasain'i Baroudi ny teny hoe “Fanjakan'i Baroa” mba hanakianana ny fanapaha-kevitry ny filoha izay nahabe-adihevitra amin'ny fanesorana ny Governoran'ny Banky Foibe. Nitsikera mafy ny antonta-taratasy momba ny fanendrena Governora vaovaon'ny Banky Foibe izy. Tamin'ny 11 Jolay no nanaovana izany antonta-taratasy izany -herinandro alohan'ny fankatoavan'ny NAC ny fanapaha-kevitra hanesorana ny governora teo aloha.
Nampian'ny Bilaogin'i Boukornine mpamaritra anarana hoe “Mpanao didy jadona” ilay teny “Fanjakan'i Baroa” mba hamaritana ny “Tonizia vaovao.” Nanazava ny safidiny ny mpanoratra:
Tonizia, firenena mpamokatra sy mpanondrana oliva be indrindra no nanjary “Fanjakan'i Baroa”, hoy i Ali Gannoun nanoratra tao amin'ny gazety Tunis Tribune:
Namoaka dika photoshop momba ny fangon'ny Hetsika Ennahdha ihany koa ny Tunis Tribune. Ennahdha no lehiben'ny antoko telo mandrafitra ny governemanta ankehitriny ao Tonizia, ary voafehiny avokoa ny seza maherin'ny 40 isan-jato ao amin'ny antenimiera NAC.